Naphi na FM. Uyenza njani iakhawunti naphi na.FM ukumamela umculo wakho naphina | Iindaba zeGajethi
Ai-nywhere FM sisicelo esikwi-intanethi onokuthi ulayishe ingqokelela yakho yomculo ukuze uyimamele kamva naphi na apho unonxibelelwano lwe-Intanethi. Inkqubo ilula kakhulu. Uyila iakhawunti, ngamanyathelo amathathu nje, kwaye uqalise ukulayisha umculo wakho Naphi na, emva koko unokumamela kunye nomdlali okwi-intanethi kwiwebhusayithi enye ngaphandle kokufaka nantoni na simahla. Inkonzo ise-beta, oko kukuthi, iyavavanywa kwaye ingxelo yokugqibela ayikakhululwa, kodwa okwangoku akukho ngxaki zaziwayo kwaye usebenza ngokuchanekileyo.
ANgaphambi kokuba sibone indlela yokwenza iakhawunti kunye nokulayisha iingoma naphi na, kwiFM masibone izinto ezimbalwa ekufuneka sizikhumbule:
Naphi na apho FM uphuhliswa khona ngeFlash 9 kwaye ngenxa yoku ayisebenzi kakuhle kwiinkqubo zokusebenza kweLinux. Kutshanje Adobe ikhuphe uguqulelo lweFlash 9 yeLinux kodwa le nguqulo ayisebenzi ngokupheleleyo kwaye nangona ikuvumela ukuba udlale iingoma ezigcinwe naphina.FM ayikuvumeli ukuba ulayishe iifayile kwisicelo. Ke ukuba ufuna ukulayisha iingoma zakho naphina.FM kuya kufuneka uyenze kwinkqubo yokusebenza ehambelana ngokupheleleyo neFlash 9.
Akukho mda ekulayisheni iingoma, ubuncinci okwangoku kwaye ngelixa uguqulelo lwe-beta luhlala lukhona. Kwixesha elizayo, inani lokulayisha linokulinganiselwa okanye lihlawuliswe iakhawunti yeprimiyamu (enamalungelo amaninzi).
Awuyi kuba nakho ukukhuphela umculo owufaka kuyo naphina apho FM uyidlale khona, Ungazibuza, ungandenzela ntoni i-anywhera.fm? Ewe, umzekelo, ukumamela umculo owuthandayo ovela eofisini yakho nje ngokudibanisa www.abany.be kwaye ufake iakhawunti yakho.
Naphina i-FM isimahla. Njengoko benditshilo kwicandelo elidlulileyo, mhlawumbi kwixa elizayo baya kuhlawulisa ngokusebenzisa iakhawunti yepremiyamu apho kuye kwafikelelwa ukuba kuya kuqhubeka ukubakho iiakhawunti eziqhelekileyo zasimahla kodwa kunye nokusikelwa umda (njengenani lokulayishwa).
Naphi na apho i-FM isisiNgesi, kodwa kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Siza kubona kamva ukuba ukwazi intsingiselo yamagama ambalwa kuya kuba nakho.
Naphi na apho i-FM ixhasa kuphela iingoma ze-MP3, Ke ukuba uneengoma kwenye ifomathi, njenge-wma okanye i-wav, kuya kufuneka uziguqule ukuze uzilayishe. Ungasebenzisa ifayile ye- Isiguquli online ukuguqula imixholo yakho isuke kwenye ifomathi iye kwenye.
BEwe, ukuba unayo ibug, masibone ukuba uyenza njani iakhawunti kwaye ulayishe iingoma zakho ngale ncwadana inyathelo ngenyathelo ngenyathelo:
1) Into yokuqala ukuya kuyo naphi na.fm. Xa iphepha livula, iwindow eyamkelekileyo iya kuvela (Wamkelekile naphina.FM) apho bakwazisa khona nge imisebenzi emithathu ephambili ye-Anywhere FM zezi:
Iyenyuka ingqokelela yakho yonke yomculo («Layisha ingqokelela yakho yonke yomculo»)
Yidlale naphi na ngesona sidlali somculo sigqwesileyo ("Yidlale naphina kwesona sidlali somculo sisewebhu")
Fumanisa umculo omtsha ngeRadio yoMhlobo ("Fumana umculo omtsha ngeRadio yoMhlobo").
2) Cofa kwiqhosha eliluhlaza elithi "Nandipha!" (oko kukuthi "Yonwabela!") Ukuvala iwindow yokwamkela, emva koko ujonge kwiqhosha elimthubi "Sayina" kwikona ephezulu ngasekunene kwefestile ye-FM naphi na.
3) Cofa kweli qhosha ukwenza iakhawunti kwaye iwindow iya kuvula apho kufuneka ufake khona igama lomsebenzisi oza kulisebenzisa naphi na.FM kunye negama lokugqitha (ipassword). Kubaluleke kakhulu ukuba unake xa ubhala igama eligqithisiweyo, kuba irejista ayikunyanzeli ukuba uyiphinde kabini kwaye ukuba xa ubhala igama eligqithisiweyo wenza impazamo awuyi kuba nakho ukungena kuba ayizukuqonda ukuba leliphi igama eligqithisiweyo ugqibile ukubhala. Ke khetha igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha kwaye ubhale phantsi ukuze ungalibali, kuba awuzukufumana imeyile ngesikhumbuzi segama eligqithisiweyo okanye nantoni na enjalo.
Xa ufake igama lakho kunye negama lokugqitha, cofa kwindawo ethi "Yenza" ukwenza iakhawunti yakho.
Y sele uyenzile iakhawunti yakho. Ngoku makhe sibone singazifaka njani ezinye iingoma emva koko ubamamele naphi na ngokufikelela kwi-Intanethi naphi na kwi-FM.
1) Cofa kwiqhosha "Layisha" kwikona esezantsi ekunene.
Le festile ilandelayo iya kuvula ngesihloko "Khetha iifayile eziza kulayishwa ku-www.anywhere.fm" kwaye njengoko igama layo libonisa kuyo kuyakufuneka sikhethe iifayile zomculo esifuna ukuzilayisha naphi na. IMP3 ngoko sukuzama ukufaka iifayile kwifomathi engeyiyo le.
2) Xa unefayile ezikhethiweyo, cofa kwindawo ethi "Vula" iqhosha kwaye ukulayishwa kuya kuqala. Kulo mfanekiso ulandelayo unokubona ukuba imeko yokulayisha iboniswa njani kwibha eluhlaza okwesibhakabhaka ebonakala ngezantsi nakwipesenti esekunene.
3) Xa zonke ii-mp3s zigqityiwe ukulayishwa, uya kuba nakho ukuzibona kwindawo esembindini womdlali wewebhu we-Anywhere FM.
BEwe, yiyo loo nto, kufuneka ukhethe ingoma ofuna ukuyidlala kwaye ucofe iqhosha lokuDlala. Kwiimfundiso zethu zexesha elizayo siza kubona inyathelo ngenyathelo lokulinganisa iingoma zethu ukuze sikwazi ukuzicwangcisa, indlela yokuhamba kuyo naphina. ezinye izinto. Kude kube lelo xesha, ndiyathemba ukuba esi sifundo sinyathelo ngamanyathelo siluncedo kuwe. Imibuliso yeVinegary.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Naphi na FM. Uyenza njani iakhawunti naphi na.FM ukumamela umculo wakho naphina
Molo! Ngaba uyazi ukuba uluhlu lokudlala olwenziwe lunokubekwa kwibhlog yethu okanye kwiwebhusayithi?
Enkosi! = D